अष्ट्रेलियामा डढेलो निभाउन गएका एक अग्नी नियन्त्रकको मृत्यु, पहिलो सन्तानको मुख पनि देख्न पाएनन्
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा अझै आउन सकेको छैन । आइतबार डढेलो नियन्त्रणका लागि खटिएका एक अग्नी नियन्त्रक स्वयमसेवको मृत्यु भएको छ ।
अष्ट्रेलियामा डढेलो घरहरु बनायो खरानी, ३० हजार विस्थापित
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको पूर्वी गिप्सल्याण्ड क्षेत्रमा रहेको जङ्गलमा आगलागी भएपछि ३० हजारभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा विस्थापित भएका छन् ।
अस्ट्रेलियामा चरम गर्मीः सबै राज्यको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी
सफल होला त काठमाडौँ-अष्ट्रेलिया सिधा उडानको पहल ?
काठमाडौँ । नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच सिधा हवाई उडानका लागि पहल गरिएको छ । नेपाल र अष्ट्रेलिया बीचमा गत अक्टोबर २ तारिखमा हवाई सम्झौता भएको थियो ।
अस्ट्रेलिया सरकारलाई अर्को आपत, भिक्टोरियामा पनि दन्कियो डरलाग्दो डढेलो
सिड्नी । पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा डढेलोको त्रासमात्र रहेको छ । हालसम्म डढेलोका कारण १० जनाको ज्यान गइसकेको छ । विस्तारै डढेलो नियन्त्रामा आउँला भन्ने सोच बनाएको अस्ट्रेलियाली सरकारलाई अर्को आपत आइ लागेको छ ।
मृत्युको मुखबाट फर्केका एक अष्ट्रेलियनको कथा
एजेन्सी । शाम क्याथोर्न अष्ट्रेलियन मोटिभेसनल स्पिकर (उत्प्रेरक वक्ता), लेखक, लाइफ कोच हुन् ।
अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा गरिब गाउँ ‘मुंगललाला’
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्डको मध्य दक्षिणी मागमा रहेका मुंगललालाका बासिन्दाहरुको वार्षिक आम्दानी कति होला ? अष्ट्रेलियाको ट्याक्सेसन अफिसले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुको वार्षीक आम्दानी ३१४८ हजार डलर रहेको छ । सानो र गरिब गाउँ सहरको रुपमा परिचित यो गाउँले धेरै समस्याहरुबाट गुज्रिनु पर्यो ।